Yedu "inonyanya kukoshesa" rosi! Kusanyorova uye kunakirwa nekunhuhwirira kwemazhizha pudding uye madhizaizi, iyi yakasviba, yakasviba magedhi eItaly izere nekunhu, ichiratidza yakatsvuka berry michero, asi ine hukakwana hwakakwana nemhedzisiro inozorodza yekupedzisa.
Mabhangi ekumaodzanyemba eBenaco akabvira kare kuchengetedza tsika yewaini yakajeka, nyowani uye nenyasha seRosa Dei Frati. Iyo yakakwirira-yepamusoro Rosé ine hukuru hwekushamisika neane masimba akapusa. Chitsva, chisina kusimba asi chakapinza panguva imwe chete, chinogona kuve chiri muzinda wepatafura. Kumhuno, kune mamwe matanho emaruva e hawthorn, apuro yakasvibira, chena almond, uye yegira remusango. Mumuromo, inonaka, yakatsva, inodya svutugadzike, uye inokwanisa kukurudzira mukanwa kutenda kwayo yakapinza asiti uye nezano remichero diki tsvuku. Iyo nyore yekunwa inosimudzira maitiro asina hanya negirazi repiri. Inokurudzirwa nenyama dzakarapwa, miriwo yakakangwa, howa, nyanya uye mozzarella saladi, pasita yakaomeswa, uye chitubu chemvura, chena chena nyama, uye hove dzakarodzwa kwazvo.
Chakavanzika chakabudirira chewaCa` Dei Frati waini ndiyo mizambiringa yavo yakajeka. Vazhinji vagadziri munzvimbo yakatarisana uye vanodzidzisa mizambiringa yakakwira. PaCa` Dei Frati, mizambiringa inodzidziswa yakaderera, mizambiringa mitsva ine huwandu hwekusima pakudyara, uye goho riri pasi pazere pakati penzvimbo yacho.
Waini yakasvibirira yemaridha waini yakatsva asi izere nokunaka, inoratidza zvinyoro nyoro berry michero. Iko kune kugadzikana uye chiyero mune iyi rosé yakarongedzwa, iyo inopera pane yekupedzisira, inoramba ichizivikanwa.
Hufakazi hwekambani yeCà Dei Frati yakatanga kubva 1782. Iyo inofanirwa nemuenzaniso weItaly dzimba, izvo minda yavo yemizambiringa yakakura kubva pa12 mahekita kusvika ku140 mahekita mumakumi maviri emakore apfuura. Kuwedzera kwafanana nekwekuwedzerwa uku muhuwandu, uye nhasi mhuri inozivikanwa zvakanyanya semugadziri akanakisa mudunhu.